Abavelisi boMatshini beShot Blasting, abaThengi-baseTshayina abaTshitshayo boMshini weShot
Ngomatshini wohlobo lweShot Blasting Machine yoLwakhiwo lwePlati yensimbi
Olu hlobo lomatshini wokudubula olubizwa ngokuba ngumatshini wokudubula ubhubhani, lusetyenziswa kwipleyiti yensimbi. Inokomeleza ubume beplate yentsimbi.
Lo matshini usebenza kwi-rantanthe rust kunye nokupeyinta kumphezulu wepleyiti yentsimbi, icandelo lesinyithi kunye nolwakhiwo lwensimbi ekuhanjisweni, kwimoto, ngesithuthuthu, kwibhulorho nakwimizi-mveliso.
Ngokuzenzekelayo Ahorizontal H Beam Rust Susa umatshini wokuqhumisa iShot
Ngokuzenzekelayo i-AHorizontal H Beam Rust Susa umatshini wokuqhumisa iShot
Umatshini wokudubula uqhushumbe usetyenziselwa i-iron enkulu enje nge-H-yensimbi emile, isitya sensimbi, njl. ingasusa umhlwa, ulusu oxide, i-welding slag, ipeyinti yenkunkuma nokunye.
I-Q69 Ngomatshini woLuhlaza wokuGqibezela umshini weAluminiyam Die imisebenzi yokuphosa
I-Q69 Ngomatshini wohlobo lweBot Shasting for Aluminium Die Casting
Ngomatshini wokudubula udubulo lungasetyenziselwa ukuphosa i-aluminium kufa, lunokususa umhlwa, ulusu lwe-oxide, i-welding slag, ipeyinti yenkunkuma nokunye.
Ukufunyanwa kwePlate ye-Photoelectric kunye neCandelo leNtsimbi yeShot Blasting Machine esetyenziselwa ukucoca iRust kumphezulu weSakhiwo seNtsimbi.
Q69 Ukudlula kuMatshini woLuhlu lweShot lweCandelo leNtsholongwane yensimbi yeCandelo
Ukudlulela kwi-Q69 kuMatshini woLuhlu lweShot yeCandelo leSinyithi seSinyithi seSinyithi emva kweminyaka yokuphuhliswa kunye nokuphuculwa, iimveliso zifikelele kwinqanaba eliphambili e-China.
Itekhnoloji yokuqhekeza kwesanti ithathe indawo ebaluleke ngakumbi kwitekhnoloji yonyango lwe-aluminium profiles, emele imeko yophuhliso lweeprofayili ze-aluminium zanamhlanje.
Emva kwentlabathi engafakwanga, iprofayile ingazisusa ngempumelelo iziphene zamatshini okucheba, umtya we-welding, iinkozo ezihlanganisiweyo kunye nokunye, kwaye isebenzisane netekhnoloji yokunyanga i-oxidation yonyango, inokuqhubekeka iphrofayli ngokuqaqamba okwahlukileyo kunye nombala womhlaba wesanti, kwaye nayo Fezekisa ulusu okanye isinyithi sensimbi evakalayo isiphumo ngokukhetha i-iron shot nge-size ezahlukeneyo.
I-Q69 Series Plate yentsimbi kunye neProfayili yecandelo leShot Blast Blasting Machine
Ngokuzenzekelayo H I-Rum Rust Susa umatshini wokuqhushumza
Umatshini woqhushumbo lwe-Q69 uthotho olusetyenziselwa i-iron enkulu enje nge-H-yensimbi emile, itafile yensimbi, njl. Ingasusa umhlwa, ulusu oxide, i-welding slag, ipeyinti yenkunkuma nokunye.
Q69 Dlula kuMatshini wohlobo lweBot Shasting ye-H Beam
Umatshini woqhushumbo we-Q69 uthatha indawo yokucoca umhlwa kunye nokupeyinta kumphezulu wesibonda seH, iplati yensimbi, intsimbi yecandelo kunye nesinyithi sensimbi, ityhubhu yentsimbi kunye nombhobho wokuhambisa, imoto, isithuthuthu, ibhulorho kunye nomzi mveliso.
1). Indawo yokuqhekeza yamkela uyilo oluncediswa yikhompyuter, kwaye ingaphezulu kunye nelingezantsi lidityaniswe kakuhle.
2). Yamkela ukubonwa kweefotoelectric. Inemisebenzi yolawulo oluzenzekelayo lokulinganisa ububanzi, ubude bokulinganisa, umlinganiso wokufuduswa.
3. IParadise yezobugcisa: I-ATTACHED
4. Iinkonzo eziHleliweyo ziyafumaneka
Samkela uyilo ngokwezifiso ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Ke pls ngesisa ngesisa iimfuno zakho zokucoca ezithile zomsebenzi wakho kunye neqela lethu iinjineli ze-professoinal ziya kukwenzela isicwangciso esifanelekileyo.
5. Dlula kwicandelo lokudubula ukuqhuma
. ukudubula ukuqokelela
. igumbi lokudubula
. Inkqubo yokuhambisa eqengqelekayo
. Inkqubo yokususa uthuli
. isikulufu sokuhambisa
. isitshixo sokudubula
. Inkqubo yokulawulwa kombane
Umatshini weTumblast Tumble Shot Shot Blasting Machine for Springs and Bolts
Nikezela ngoYilo lobuGcisa loYilo. Ngaba unokuyila owona matshini ufanelekileyo ngokuhambelana nemfuno yeenkcukacha zakho kunye nendawo yokusebenza
Umatshini wokuqhushumba Shot sisiphumo sokucoca, ubume bendawo, ingxolo ephantsi, izixhobo zokucoca ezifanelekileyo ezifanelekileyo, inezi mpawu zilandelayo:
1. Umatshini usebenzisa i-cantilever centrifugal blast wheel, unobomi obude, isakhiwo esilula kunye nezinye iimpawu.
2. Ngokufumana ikhethini ngokupheleleyo kukwahlula umxube owahlukanisayo, kunye neziphumo ezilungileyo zokwahlula kunye nemveliso ephezulu, inefuthe elihle ekuphuculeni ubomi beli bl bling.
3. Sebenzisa ithrekhi yerabha enganyangekiyo, unciphisa ukusebenza kwengozi yomonakalo kwaye emva koko unciphise ingxolo yomatshini.
4. Sebenzisa ingqokelela yokuqokelela uthuli, uthuli lunokuqokelelwa kwindawo enothuli okanye lungabandakanyi ngaphandle, luphucule imeko yomsebenzi.
Umatshini wokudubula owenziwe nge-H-beam, ngowomatshini woqhushumbo wohlobo lokudubula, olusetyenziswa ikakhulu kulwakhiwo nakwamanye amashishini. Isetyenziselwa ukuphelisa uxinzelelo kunye nokucocwa komhlaba okucocekileyo izakhiwo zensimbi enobungakanani bentsimbi ephezulu kunye ne-H yensimbi.
Izixhobo ziquka: igumbi lokucoca eliphambili nelincedayo, isixhobo sokudubula, inkqubo yokusebenza yokuhambisa, istayile sokuhambisa isikroba eside, isixhobo sokuhambisa esinqeni, isitshetshe, isistim sokudubula, inkqubo yokulungisa umbane, inkqubo yokuhambisa umbane, iqonga lokulawula umbane, njl.
Dubula Umatshini Wokutshula, H umatshini wokudubula uqhushumbe, Shot Blasting Turbine, Umatshini wokuqhushumba Shot, I-Shot Blasting Wheel, ukudubula kuqhuma iindawo zokuSebenzisa, Zonke iimveliso